ထောင်​တန်​တဲ့ စကား ‘ရယ်​’ ​ပေါ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » ​ထောင်​တန်​တဲ့ စကား ‘ရယ်​’ ​ပေါ့	14
​ထောင်​တန်​တဲ့ စကား ‘ရယ်​’ ​ပေါ့
Posted by naywoon ni on Mar 7, 2015 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 14 comments
​ထောင်​တန်​တဲ့ စကား ‘ရယ်​’ ​ပေါ့ မနက်​က ​နေ၀န်းနီ သူငယ်​ချင်း ကိုသက်​နိုင်​တစ်​​ယောက်​ အိမ်​​ကို ​ပေါက်​ချလာပါတယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီက အိပ်​​ကောင်းတုန်း ။ ဂဇွတ်​တက်​ထဲမှာ စာ​ရေး​နေတာ​က ည ၂နာရီ ​လောက်​​ရောက်​သွားတယ်​ ။ ပြီး​တော့ ဖွ ဘုတ်​​တော်​ကြီးမလဲ ဟိုအ​ရေး ဒီအ​ရေး သိချင်​တာ​လေး​တွေ ရှာဖတ်​ ရ​သေးတယ်​ ။ ခုတစ်​​လော ​ဘောလုံးပွဲ ကို ​ကျောခိုင်းလိုက်​လို့ လက်​ဖက်​ရည်​ဖိုး ထဲက ဖုန်း​ဘေလ်​​လေး မှန်​​နေတုန်း ​ရေးချင်​​လေး​တွေ စုထားတာ အံထုတ်​​နေတာ ။ ​နေ့ခင်း အချိန်​​တွေမှာလည်း ပူ​တော့ စာ​ရေးဖို့ ဈာန်​သွင်းမရ ။ အပူချိန်​​လျော့တဲ့ ညပိုင်း အချိန် ​လေးမှာပဲ ဖုန်း​လေး လက်​ဖဝါး​ပေါ်တင်​ရိုက်​​နေရတာ အားမရ​ပေမဲ့ ​ရေး​နေရင်း အချိန်​​တွေ ကုန်​သွားတာ သတိမထားမိ ။ ဖုန်းက ဘက်​ထရီ ကုန်​မှ အိပ်​မယ်​လုပ်​​တော့ မနက်​ သုံးနာရီ ။ အဲ့​တော့ အိပ်​​ရေးမ၀ ။ သူက DVB ဆိုလား အဲ့ လိုင်းကြည့်​ရ​အောင်​လာ​ခေါ်တာ ဆိုလို့ မျက်​နှာသစ်​ပြီး သူ့ဆိုင်​ကယ်​​နောက်​က ပဲ လိုက်​သွားမိတယ်​ ။ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​​ရောက်​​တော့ သတင်းက ပြီးသွားပြီ ။ ဒါနဲ့ လက်​ဖက်​ရည်​ မှာပြီး စားပွဲ​ပေါ် ​ရောကာ​နေတဲ့ ဂျာနယ်​ အ​ဟောင်း ​ကောက်​လှန်​ ကြည့်​မိပါတယ်​ ။ ပွင့်​ပွင့်​လင်းလင်း ​ရေးတတ်​တဲ့ ဂျာနယ်​တို့ ထုံးစံအတိုင်း ​နေ၀န်းနီ ဖတ်​မိတဲ့ သတင်းက ” သမဝါယမ ၀န်​ကြီးက ပြည်​ပ ( အချစ်​​တော်​ကြီးဆီက ) ​ဒေါ်လာ သန်းသုံးရာ ​ချေးဖို့ ကိစ္စ ခွင့်​ပြုလိုက်​တာက မဲဆွယ်​ပွဲ ရန်​ပုံ​ငွေ သုံးဖို့လား လို့ ​ရေးထားတဲ့ သတင်း​လေးပါ ။ ထူးထူးခြားခြား သတင်းမဟုတ်​​ပေမဲ့ အနားက ကိုသက်​နိုင်​က်ို ပြလိုက်​​တော့ ” ဘယ်​ကလာ အဲ့ဒိသတင်းက ဒိတ်​​အောက်​​နေပြီ ​နောက်​ထပ်​ သန်းနှစ်​ ရာ နဲ့ သန်းငါးရာ ​ချေးမှာ ”
လို့ ​ပြော​နေတုန်း အနား ဖြတ်​သွားတဲ့ ဆိုင်​ရှင်​က
“သန်းငါးရာ​တောင်​ ဟုတ်​လား လူတစ်​​ယောက်​ ဆယ်​သန်းနှုန်းလောက်​ ဟုတ်​လို့လား ”
ကိုသက်​နိုင်​က ​ဒေါသ သံနဲ့ 
” အဲ့ ဆယ်​သန်း ခင်​ဗျား​ပေးမယ်​ သူတို့မဲထည့်​မလား ”
ထုံးစံ အတိုင်း ဆိုင်​ရှင်​က ရယ်​ကျဲကျဲနဲ့
” ကျုပ်​တစ်​​ယောက်​ထဲ​ပေးလို့​တော့ မရဘူး တိုင်းပြည်​က ရှိတဲ့ လူအကုန်​​ပေးလိုက်​ ။ ပြိီးရင်​ အဲ့ပိုက်​ဆံနဲ့ နိုင်​ခြားသွား​နေပြန်​မလာနဲ့ ။ အပြီး​နေ ။ ဒီတိုင်းပြည်​ ကိုယ့်​တိုင်းပြည်​လို့မမှတ်​​ကြေး ။ ကျန်​ခဲ့တဲ့သူတို့​တွေ တလုပ်​ သိမ်းရင်​ခံလိုက်​ ။ ဟိုဟာ​တောင်းလဲ သူ့တို့ဟာ သူတို့​ပေးလိုက်​ကြ ။ မ​ကောင်းဘူးလား ”
အရွှန်း ထ​ဖောက်​ပါ​လေ​ရော ။
အဲ့​တော့မှ ကိုသက်​နိုင်​က ရယ်​ကျဲကျဲနဲ့
” တိုင်းချစ်​ပြည်​ ချစ်​ကြီး ခင်​ဗျားဘယ်​နိုင်​ငံက လက်​ခံမှာလဲ ”
” အိုဗျာ ဒီ​လောက်​နိုင်​ငံ​တွေ အများကြီး လူတစ်​​ယောက်​ ​ဒေါ်လာ ဆယ်​သန်း​တောင်​ပါမှာ တစ်​နိုင်​နိုင်​ငံက​တော့ လက်​ခံမှာ​ပေါ့ ။ တိုင်​ပြည်​ ချစ်​တယ်​ဆို​ပေမဲ့ ရပ်​ပြစ်​ ဆယ်​ပါးဆိုလား အဲ့ထဲမှာပါရင်​ ​နေတဲ့ အရပ်​စွန့်​ရမယ်​လို့ ဘုရား​ဟောစကားရှိသားဟ ။ ဘုရား​ဟောစကားနားမ​ထောင်​ပဲနဲ့ ရမ်းချစ်​​နေလို့မဖြစ်​​သေးဘူး ။ ဘုရားစကားနား​ထောင်​လိုက်​တာ​ကောင်းပါတယ်​ ။ ဆယ်​သန်းရမယ်​ဆိုရင်​​ပေါ့ ”
အဲ့သလို​ပြောပြီး လက်​ဖက်​ရည်​ မှာတဲ့သူရှိလို့ လက်​ဖက်​ရည်​​ဖျော်​ခုံဆီ ထွက်​သွားပါ​တော့တယ်​ ။ သူ​ပြောတာလဲ ဟုတ်​သလိုလို ။
ဒါ​ပေမဲ့ ကြားလိုက်​တဲ့ ​နေ၀န်းနီ မှာ​တော့
ဒါ​ကြောင့်​ ​ထောင်​တန်​တဲ့ စကားရယ်​​ပေါ့ ဆိုသကိုး ။ ​ကောင်းပါတယ်​​လေ ။။အဲ့ဒိလို ​ပေါ့​ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အ​ခြေအ​နေတစ်​ခုကို ဖြတ်​သန်းနိုင်​တာ ။ ကိုယ်​လည်း ကြားဝင်​​ဖြေရှင်းနိုင်​တဲ့ ကိစ္စ မှ မဟုတ်​​ပေပဲလို့ပဲ​တွေးရင်း ……….
မြစပဲရိုး says: ဒီနေ့ ခေတ်ကြီး ထဲ သမဝါယမ ဆိုတာ ဒီနိုင်ငံ တွေ မလဲ အဖွဲ့ နာမယ် လို မျိုး ရှိနေဆဲပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည် က သမဝါယမ ကတော့ ဝန်ကြီးဌာန ကြီး နဲ့ ကို ဖြစ်ပြီး အများ ပြည်သူလူထု နဲ့ ဘာ ဆို ဘာမှ မပါတ်သက်။
ကိုကျော်ဆန်း အတွက် သီးသန့်ဖွဲ့ ပေးထားတာ ကော။
naywoon ni says: သူ့ကို နံခြား ပက်​ဆံရှာဖို့ သက်​သက်​ထားတာ​လေ ကိုးတန်း​လောက်​က ​ဘောဂ​ဗေဒမှာ သမဝါယမသည်​ ဆိုရှယ်​လစ်​စနစ်​၏ ဒုတိယမံဒိုင်​ဖြစ်​သည်​လို့ သင်​ဖူး​တော့ သမဝါယမ လို့ကြားတိုင်း ငါတို့နိုင်​ငံ ဆိုရှယ်​လစ်​အရိပ်​​အောက်​က မလွတ်​​မြောက်​​သေးပါလားလို့ ခံစားရပါတယ်​ ။ အရီး​ရောက်​​နေတဲ့ နိုင်​ငံက သမဝါယမရဲ့ ဖခင်​ကြီး​တွေရဲ့ နိုင်​ငံမဟုတ်​လား ။ အဲ့​တော့ သူ့​မြေးမြစ်​​တွေ​တော့ရှိဦးမှာ​ပေါ့ ။
kai says: “သန်းငါးရာ​တောင်​ ဟုတ်​လား လူတစ်​​ယောက်​ ဆယ်​သန်းနှုန်းလောက်​ ဟုတ်​လို့လား ”
မြန်မာ့လူဦးရေ.. ၅၁သန်း.. သန်း၅၀ပဲထားပါတော့…
ဒေါ်လှ သန်း၅၀၀ ကို.. ခွဲရင်.. တယောက်.. ၁ဒေါ်လာဆို.. ဒေါ်လှ သန်း၅၀…။
တယောက် ၁၀ဒေါ်လာခွဲယူရင်.. ဒေါ်လှ သန်း၅၀၀။
တယောက်.. ဒေါ်လာ ၁၀၀ (မြန်မာငွေ တသိန်းလောက်) ..ယူရင်.. ဒေါ်လာ သန်း၅ထောင်( ၅ဘီလီယန်)
တယောက်… ဒေါ်လှ ၁၀၀၀ (မြန်မာငွေတသန်းလောက်) ခွဲရင်.. ဒေါ်လှ သန်း၅သောင်း… ( ၅၀ဘီလီယန်)
တယောက်… ဒေါ်လှ ၁၀၀၀၀(တသောင်း) ခွဲကြရင်.. ဒေါ်လှ သန်း၅သိန်း.. ( ၅၀၀ဘီလီယန်)
တယောက်… ဒေါ်လှ ၁၀၀၀၀၀(တသိန်း) ခွဲကြရင်.. ဒေါ်လှ ၅၀၀၀ဘီလီယန်( ၅ ထရီလီယန်)
တယောက်… ဒေါ်လှ ၁၀သန်း ခွဲကြရင်.. ဒေါ်လှ ၅၀၀ ထရီလီယန် $5,000,000,000,000, 000
In 2013, according to the CIA’s World Factbook, the GWP totalled approximately US$87.25 trillion
ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး GDP တောင်.. ၂၀၁၃စာရင်းအရ.. ၈၇.၂၅ ထရီလီယန်ဒေါ်လာရှိတာပါ..။
ကြည့်လည်းလုပ်ကြပါဦ်း…. ကြုံလို့ပြောရရင်.. မြန်မာတွေ.. ငွေဂဏန်းသခ်ျာအမည်ပေးစနစ်မှာ…
ခု၊ဆယ်၊ရာ၊ထောင်၊သောင်း၊သိန်း၊သန်း၊ကုဋေ၊ ကုဋာ၊သင်္ချေ၊သခ်ျာ၊ လုပ်ထားတာကိုသုံးကြတာထက်..
ငွေ. ရာ..။ထောင်…။သောင်း တခုခုကို.. အဓိကထား.. ပြောသင့်နေပြီထင်တာပဲ..။
အမေရိကန်တွေက.. သူ့ငွေအကြီးဆုံးအရွက်ဖြစ်တဲ့.. ဒေါ်လာရာဂဏန်းကနေပြောတယ်..။ ဥပမာ.. ဒေါ်လာ ၁သိန်းဆို.. hundred thousand
ဂျပန်တွေက.. . သူ့ငွေအကြီးဆုံးအရွက်ဖြစ်တဲ့.ယန်း ၁သောင်းတန်ကပြောတယ်..။
မြန်မာတွေ.. ကိုယ့်ငွေအကြီးဆုံးကနေ.. မြှောက်ပြီးပြောသင့်တယ်ထင်တာပဲ..။
“ငါးထောင်တန်စကား.. ရယ်ပေါ့..။” Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဟုတ်​ပါ့ဗျာ ကျ​နော်​သတိမထားမိဖူး ကျ​နော်​တို့လူမျိုးက သိန်းဂဏန်းထက်​ပိုရင်​မတွက်​တတ်​​တော့ဘူး ။ သိန်းဂဏန်းနဲ့ သုံးတာလဲ သိသ​လောက်​ အိန္ဒိယ ပဲရှိတယ်​နဲ့တူရဲ့ ( lakh – သိန်းဂဏန်း အိန္ဒိယ အသုံးလို့ ​တွေ့ဖူးတယ်​ ) ဟိုတစ်​ခါလည်း အဘ ​ဖော က ​ဖြေရှင်းပြီးပြီ ကျ​နော်​ကိုက န​နောနမဲ့ ​နေတာ ။ ဆို​တော့ သူတစ်​ပါး အပုတ်​ချချင်​​ဇော ကြီး​နေတဲ့ ​နေ၀န်းနီ ဖြစ်​သွားပါ​ရောလား ။ ​နောက်​​နေ့ အဲ့ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​ ​ရောက်​မှ ပြန်​ရှင်းရဦးမယ်​ ။ တစ်​​ယောက်​ ဆယ်​​ဒေါ်လာ ​လောက်​ဆို​တော့ ဖုန်း​ဘေလ်​ဖိုးပဲ ရှိဦးမယ်​ ​နော့
မြစပဲရိုး says: သူကြီး တို့ တော်ချက်။
ကျွန်မ လဲ ဖတ်ပြီး ဂဏန်းတွေ ကို မတွက်မိဘူး။
ဒါမှ မဟုတ် အဲ့ လူ က ဟို ကိုလှဆွေ ကို လှောင်ထားသလား lol:-))))
ခင်ဇော် says: ထောင်တန် တဲ့ စကား ရယ် မိ လို့ အချုပ်ထဲ ရောက် ဆိုလား ဘာလားးး
ဒီရွာထဲက လူဂျီး တစ်ယောက် ပြောဖူးတာပဲ/
Wow says: ဒါနဲ့ ရပ်ပြစ် ၁၀ပါးက ဘာဒွေလဲဆြာနီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: telenor နဲ့ ရွာထဲ ဝင်လို့ အဆင်ပြေနေတာလား အဘနီ
ကျနော်တော့ အခုနောက်ပိုင်း telenor နဲ့ ဝင်ရတာ အဆင်ပြေနေသား
.ဘေလ်ကျတော့လည်း သိပ်လည်း မကုန်ဘူး။
အကြာကြီးသုံးမှ ငါးဆယ်လောက်ပဲ ဖြတ်တယ်
naywoon ni says: ခုလည်း တယ်​လီ​နောနဲပဲ​လေ ။ My internet month Pack ပဲ ၀ယ်​သုံးတယ်​​လေ 500mb ကို ၁၉၀၀ ဘိုး ။ ငါးရက်​​လောက်​​တော့ အနဲဆုံး သုံးရတယ်​ ။ နီ mp3မှာ အပြတ်​​တွေပါလား ။ ခု ပထမဆုံး နန္ဒာ သိန်းဇံ နား​ထောင်​​နေတာ Victor Soe Moe ရဲ့ စာအုပ်​ဆိုင်​မှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: အင်းးးးး
naywoon ni says: ကျ​နော်​ သိချင်​တာက ” သမဝါယမ ၀န်​ကြီးဌာန ” ဆိုတာ ဒီမိုက​ရေစီစနစ်​ကျင့်​သုံးတဲ့ နိုင်​ငံ​တွေမှာ ရှိမရှိနဲ့ ကမ္ဘာ ​ပေါ်မှာ ဘယ်​နှစ်​နိုင်​ငံ​လောက်​ ဒီသမဝါယမ ၀န်းကြီး ဌာန ဆိုတာ ရှိ​သေးလဲ ဆိုတာပါပဲ ။
kai says: Cooperative ပေါ့..။
ယူအက်စ်နဲ့.. ဂျပန်မှာ.. ၀န်ကြီးဌာန.. အစိုးရလုပ်တယ်ဆိုတာထက်.. ပုဂ္ဂလိကက တည်ထောင်လုပ်ကြတယ်လို့သိဖူးတယ်..။
အဲဒါက.. လူတွေစုပိုက်ဆံထည့်.. အသင်းအဖွဲ့ကုမ္ပဏီထောင်တဲ့.. သဘောပါပဲ..။
မြန်မာပြည်မယ်တော့.. ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က.. အမွေအဖြစ်.. အစိုးရကထလုပ်တာပေါ့…။
မဆလဖျက်သိမ်းတော့.. အဲဒီကငွေတွေ… မဆလ.. တစညပါတီမရောက်အောင်တားထားရင်းနဲ့ပဲ.. ကျန်နေတာလား..။
.. နောက်တက်လာတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကပဲ. ၀ါးချင်လို့ဖန်ထားတာလားတော့မသိ.။
ပြောသာပြောတာ.. တစညနဲ့.. ပြည်ခိုင်ဖြိုးတို့ရဲ့.. ပါတီရံပုံငွေတွေ. ..အရင်အစိုးရတွေကနေ.. ဘယ်လိုလွှဲယူလာတယ်ဆိုတာနဲ့.. လောလောဆယ်.. ငွေကြေးရှာဖွေရယူပုံတွေသိချင်လှ…။
အဲဒီအချက်က.. ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ.. ဒီချုပ်ရဲ့..နင်းကွက်ဖြစ်သင့်…။
Mike says: .“သမဝါယမ ၀န်​ကြီးဌာန ” ဆိုတာဟန်ပြသက်သက်ပါ
ခင်ဇော် says: သမ တဲ့ နေရာမှာ
ဝါယမ စိုက်ထုတ် တဲ့ ဝန်ကြီး ဌာန ကို ပြောဒါလား???